मोटोपना कसरी थाहा पाउने ? « Mero LifeStyle
अहिले जल्दोबल्दो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ मोटोपन । कोभिड–१९ का कारण पनि मानिसमा शारीरिक परिश्रमको कमीले मोटोपन बढ्दो छ । शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी बोसो जम्नु, पेट बाहिर निस्कनु र शरीरको आकारमा परिवर्तन हुनु नै मोटो हुनु हो ।
अहिले मानिस आफ्नो तौल कति हुनपर्छ ? कति तौल स्वस्थताको आधार हो भन्ने कुरामा अलमल छन् । कती हाइट भएको मानिसको तौल कति हुनुपर्छ लगाएतका विषयमा नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलकी डायटिसियन डा. प्रनिती सिंहको सुझाव यस्तो छ:
कति हाइट भएका व्यक्तिको तौल कति हुनुपर्छ ?
यो विश्वमा प्रचलित विधि हो जसलाई बडी मास इन्डेक्स भनिन्छ । यो सूत्रअनुसार उचाइलाई मिटरमा नापी आउने अंकको वर्गफल (होल स्क्वायर)ले तौल केजीलाई भाग गर्दा १८.५ देखि २२.९ सम्म भागफल आएको तौललाई सामान्य तौल मानिन्छ । उदाहरण व्यक्तिको उचाइः १६७ सेमी तौलः ५५ केजी छ भने त्यो सामान्य हो । २३ देखी २४.९ भए पनि त्यो मोटोपन हुन्छ २५ देखि २९.९ भयो भने मोटोपन भन्दा अझ एक स्टेप अगाडी गयो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
तौल बढ्न नदिन के गर्ने ?
धेरैलाई लाग्छ, खान छाड्ने बित्तिकै मोटोपन बढ्दैन भन्ने लाग्छ । त्यसैले त मोटोपन घटाउने चक्करमा धेरैले आफ्नो छाक छोडिरहेका हुन्छन् । तर, खाना छोड्दैमा मोटोपन घट्दैन । बरु यसले कमजोरी र शरीरमा पोषणको अभाव हुनसक्छ । नियमित खानामा कटौती गर्ने भन्दा पनि शारीरिक व्यायाम गर्नु उचित हुन्छ । शारीरिक रुपमा सक्रिय भएपछि वा शरीरको समूचित व्यायाम गरेपछि तौल नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ ।
— खानको नियन्त्रण गर्नु पर्छ । हामीले कति खाईराछौँ, के खाइरहेका छौँ, कति मात्रामा खाइरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा खान हुने खाद्यपदार्थहरू हरियो तरकारी, ताजा फलफूल र क्यालरी डाइट गर्नुपर्छ ।
— पानी पनि प्रसस्त मात्रामा पिउनुपर्छ । महिलाहरुले २ देखि ३ लिटर पानी खान सक्छन् भने पुरुषहरुले ३ देखि ४ लिटर पानी खानु पर्छ । तर त्यति पानी धेरैले नियमति पिएका हुँदैनन् । त्यति पानी दनिक पिउनुपर्छ ।
— स्वस्थ जीवन बाच्नकै लागि पनि तौल कम गर्नुपर्छ । तर कतिपय व्यक्तिलाई मोटोपनकै कारण व्यायाम गर्नमा समस्या हुनेगर्छ । समस्या भयो भन्दैमा व्यायाम छोड्नु हुँदैन । नियमित रुपमा जति सकिन्छ त्यति एक्सरसाइज गरेर पनि शरीरलाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ ।
— धेरै मोटो भएकै कारण कठिन व्यायाम गर्न सकिँदैन भने हल्काफुल्का व्यायाम गर्न सकिन्छ । यसको लागि मनिर्ङ वाक उत्तम विकल्प हुनसक्छ । बिहान नियमित रुपमा करिव आधा घण्टा मर्निङ वाक गर्नाले मात्र पनि शरीरमा निकै ठूलो परिवर्तन देखा पर्छ ।
— तौल नियन्त्रण गर्न राम्ररी निदाउनु पनी जरुरी हुन्छ । राम्रो निन्द्रा भयो भने हाम्रो शरीरमा भएको हर्मोनहरुको ब्यालेन्स मिल्छ । हर्मोनको ब्यालेन्स मिल्यो भने केही मात्रामा तौल पनि नियन्त्रण हुन्छ ।